Baadh Dhibaatooyinka Muuqaalka Muuqaalka
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Baadh Dhibaatooyinka Muuqaalka Muuqaalka
Markaad la kulanto dhibaatooyin kala duwan markaad isticmaaleysid Muuqaalkaaga, waad ogaan kartaa dhibaatada oo waxaad raadsan kartaa xalka.
Ugu horreyntii, waxaa suurtagal ah in sababo kala duwan ay sababi doonaan dhibaato ama astaamo isku mid ah, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso sababta dhabta ah ka hor intaadan xal u helin. Sababaha guud waa:
Qaar ka mid ah cilladaha 'Outlook Add-Ins' oo cilladaysan ayaa sababa dhibaatada.
Faylkaaga Muuqaalka PST wuu dhaawacmay ama wuu xumaaday.
Muuqaalkaaga Muuqaalka ayaa xumaaday.
Rakibidda Muuqaalkaaga ama qaabeynta ayaa khaldan.
Haddii dhibaatada ay sabab u tahay sabab 1, waxaad marka hore joojin kartaa dhammaan Add-Ins-ka Muuqaalka, sida soo socota:
Guji "Fayl"> "Xulashooyin"
Wadahadalka Ikhtiyaariyada Muuqaalka, bidix dhinaca bidix, guji “Add-Ins”.
Daaqadda weyn, guji batoonka "Tag" ee hoose ee daaqadda.
Wadahadalka COM Add-Ins, kala-sooc dhamaan Add-Ins-ka, ka dibna dhagsii badhanka "OK".
Xidh Muuqaalka kadibna restart
Tani waxay joojineysaa dhammaan Add-Ins ee Muuqaalkaaga. Haddii dhibaatadu baaba'do kadibtarting Outlook, markaa dhibaatada waxaa sabab u ah 1. Haddii kale, waxaad u baahan tahay inaad ku sii wadato habraaca xiga.
Raadi faylkaaga PST adoo raacaya tilmaamaha ku yaal article this.
Ku nuqul faylkaaga PST kombiyuutar kale oo leh Muuqaalka rakibay.
Start Muuqaalka kombuyuutarka cusub, ka dibna isticmaal "Fayl" -> "Furan" -> "Faylka Macluumaadka Muuqaalka", si aad u furto faylka PST.
Haddii feylka PST aan la furi karin, ama ay jiraan farriimo qalad ah markii la furayo feylka, markaa faylkaaga PST waa mid musuqmaasuq ah sidaa darteed waxaan xaqiijin karnaa in dhibaatadaada ay sabab u tahay sabab 2, haddii kale, haddii faylka PST la furi karo iyadoo aan wax dhibaato ah jirin, markaa faylkaaga PST waa inuu ahaadaa mid caafimaad qaba sababtuna waa 3 ama 4.
Sababta 2, waad hubin kartaa article this si loo xaliyo dhibaatada.
Sababta 3 iyo 4, waxaad u baahan tahay inaad sii wado nidaamka falanqaynta, sida soo socota:
Tag Start Menu> Panel Control> Fariin.
Guji "Muuji Profiles"
Guji "Add”In lagu daro astaan ​​cusub.
Qaybta hoose ee wadahadalka, u dhig astaanta cusub sida "Marka starkhusayso Microsoft Office Outlook, adeegso muuqaalkan ”
Xulo astaanta cusub ee la abuuray, ka dibna dhagsii “Guryaha"
Kudar faylka PST-ga faylka cusub.
Qaraarkatararagtidaada Haddii dhibaatadaada Muuqaalka ay baaba'do, markaa sababtu waa 3 adiguna waxaad hagaajisay dhibaatadaada. Haddii kale, sababtu waa 4.
Sababta 4, markaa rakibidda Muuqaalkaaga ayaa khaldan waxaana laga yaabaa inaad dib u rakibto Muuqaalka ama xitaa dhammaan xafiiska Office. Ama haddii aad leedahay habeyn nidaamkaaga ah, markaa waxaad dib ugu soo celin kartaa nidaamkaaga dhibic kayd ah markaad isticmaali karto Muuqaalka dhib la'aan.